समाचार - मौसमी बाली प्याज बाहिर आउँदै!
राम्रो श्रोताका रूपमा मेरो कामको अधिक इनामदायी हिस्साहरू भनेको तपाईं सबैले मसँग साझा गरेको थोरै चीजहरू हुन्, यो घरगुडी व्यंजन हो, तपाईंको देशहरूको बारेमा समाचार हो, तपाईं जमिनमा बढ्ने कृषि उत्पादनहरूको फोटो, वा उत्तम सबै, हामीले बर्षौंसम्म फसल काट्ने बालीहरू देखेर अचानक माटोको बीउबाट माथितिर बाहिर निस्कन तिनीहरूको ढाल विस्तार गर्न। [यहाँ बीचमा बालीको चित्र थप्नुहोस्] गत साताको अन्त्यमा एक अद्भुत आत्माले मेरो साथमा फोटो शेयर गर्यो। मैले गत दश बर्षदेखि यहाँ भन्न खोज्नु भएको सबै कुराको योग छ। म यो स्थानमा कहिले काँही धेरै लामो घुमाउन सक्छ। त्यो सुन्दर नोटमा थप्न मसँग केही पनि छैन।
हाम्रा प्याजहरू शरद seasonतुमा वार्षिक रूपमा उब्जनी हुन्छन्, तर सानो जराको प्याज मात्र उत्तरको चिसो ठाउँमा बढ्छ। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, प्याजको मौसम सधैं धेरै छोटो देखिन्छ। यसको वास्तविकता यो हो कि हामी तातो, भिजेको, चिसो जलवायुमा बाँचिरहेका छौं। तातो, भिजेको र ओसिलो बिरुवा रोग बीजाणु प्रजनन को लागी उत्तम शर्त हो। हामी स्वस्थ सम्भव बोटबिरुवाहरूमार्फत शुरू गर्छौं भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न हामी सक्दो प्रयास गर्छौं, र माटोलाई सबै चीज दिन्छौं जुन बिरूवाले सम्भव बनाउन सक्छ। एक ड्रायर मौसममा सार्न को छोटो, वा धेरै गन्ध फ fun्गीसाइडहरू प्रयोग गरेर, हामी सामान्यतया केही हप्ता फसल अवधि पाउँछौं। हामीले यस बर्षमा केही हप्ता प्याज पायौं; औसतमा औसत, र मलाई लाग्छ कि यो एक अविश्वसनीय उपयुक्त शरद wasतु को लागी एक धेरै राम्रो दौड थियो।
नोभेम्बरको प्रस्तावहरूले थोरै उज्यालो पाउन सक्दछ किनकि हाम्रा अधिकांश ध्यान झर्ने र जाडो बालीनालीतिर फर्किरहेको छ, त्यसैले हामी सबैसँग खेतमा वर्षको पछिल्लो आधा खानाको लागि राम्रो चीजहरू छन्।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, के तपाईं हाम्रो नयाँ स्थापना गरिएको वेबसाइटमा एक नजर हेर्न चाहनुहुन्छ? AGR प्याज फार्म साँच्चै तपाईंबाट सुन्न चाहन्छ! यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् www.primeagr.com र आफ्नो आवाज व्यक्त गर्नुहोस्! तपाईको ब्यापार को लागी सँधै धन्यबाद, र एक महान हप्ता छ!